China IV Catheter mveliso kunye nabenzi | Amayeza
I-cannula yegazi (IV) ityhubhu incinci kakhulu, ityhubhu eguquguqukayo ebekwe kolunye lweemithambo zakho, zihlala emva kwesandla sakho okanye engalweni. Isiphelo esinye sihleli ngaphakathi emthanjeni wakho kwaye esinye isiphelo sinevalvu encinci ejongeka ngathi yimpompo.
Zintathu iindidi eziphambili xa kuziwa kwi-ivs, kwaye ziiPeripheral IVs, Central Venous Catheters, kunye neMidline Catheters. Iingcali zokhathalelo lwempilo koku zizame ukulawula uhlobo ngalunye lwe-iv lonyango oluthile kunye neenjongo ezithile.
Iziko laseMelika lezikhokelo zolawulo lwezifo lucebisa ukutshintshwa kweepheripheral intravenous catheters (PIVC) hayi ngaphezulu kweeyure ezingama-72 ukuya kwezingama-96. Ukutshintshwa kwesiqhelo kucingelwa ukunciphisa umngcipheko wephlebitis kunye nosulelo lwegazi.
Kunye ngenaliti port / uhlobo butterfly / Pen ngathi
Inaliti yenziwe kwizinga eliphezulu zonyango ibanga ezingama-304
Ihabhu kunye nesembozo senziwe kwi-PC yebanga lonyango kunye ne-PE
Umbhobho wenziwe ngeTeflon ngemigca emithathu ye-x-ray egxunyekwe
Coca izandla zakho usebenzisa isicoci setywala.
Beka ingalo ukuze ikhululeke kwisigulana kwaye ichonge umthambo
Faka isicelo sokhenketho kwaye uphinde ujonge umthambo
Nxiba iiglavu zakho, coca isikhumba sesigulana kunye nokusula utywala kwaye makume.
Susa i-cannula kwiphakheji yayo kwaye ususe isiciko senaliti uqinisekise ukuba awuyichukumisi inaliti.
Yolula ulusu kude kwaye wazise isigulana ukuba kufuneka silindele ukukrala okubukhali.
Faka inaliti, bevel phezulu ngaphezulu malunga nama-30 degrees. Phambili inaliti kude kubonakale ukubuyela umva kwegazi kwihabhu esemva kwenkanunu
Nje ukuba ukubuyela umva kwegazi kubonwe, qhubela phambili yonke i-cannula enye i-2mm, emva koko ulungise inaliti, uqhubekisele phambili i-cannula ungene emthanjeni.
Khupha i-tourniquet, faka uxinzelelo kumthambo kwincam ye-cannula kwaye ususe inaliti ngokupheleleyo. Susa ikepusi enaliti uyibeke esiphelweni se-cannula.
Yilahle ngononophelo inaliti emgqomeni.
Faka isinxibo kwi-cannula ukuyilungisa endaweni kwaye uqinisekise ukuba isitikha somhla sigqityiwe kwaye sifakiwe.
Jonga ukuba umhla wokusetyenziswa kwetyuwa awudlulanga na. Ukuba umhla ulungile, gcwalisa isirinji nge-saline kwaye uyihlambe kwi-cannula ukukhangela ubukho bayo.
Ukuba kukho nakuphi na ukunganyangeki, okanye ukuba kubangela nayiphi na intlungu, okanye uyaqaphela ukuba kukho ukudumba kwethishu okwalapha ekhaya: kwangoko yeka ukugungxula, susa i-cannula kwaye uqale kwakhona.
Lahla emva kokusetyenziswa kube kanye.
Ukupakisha okupheleleyo komntu ngamnye
50pcs / ibhokisi 1000pcs / ibhokisi
5. Musa ukuphinda wenze inaliti xa ixesha lokuqala lisilele
Oyinyumba: Oyinyumba ngegesi ye-EO
Egqithileyo Iindlela ezintathu zokumisa
Okulandelayo: ICombi yokumisa
Ibhabhathane Iv Catheter
Umda we-Iv Catheter
Iindlela ezintathu zokumisa
Imaski yobuso beKN95
Ubungakanani beBlade yoPhando, Ukulungiswa kotywala, Ukufunxa iCatheter, Ityhubhu yokondla iintsana, Utywala Pad, Iv Catheter,